काठमाडौंका महाबौद्ध, असन, भोटाहिटी, इन्द्रचोक, न्युरोड सर्वसाधारणको बढी चाप हुने क्षेत्र हुन् ।  काठमाडौंलाई नै उच्च जोखिमको सूचीमा राखेको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारी बताउँछन् । उनले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकामा लक्षणसहितको संक्रमित देखिएकाले सावधानी अपनाउन जरुरी छ ।’
शुक्रबारसम्म उपत्यकामा ९ सय ८२ जनामा कोरोना देखिएको छ । तीमध्ये काठमाडौंमा ७ सय ६६, भक्तपुरमा ८२ र ललितपुरमा १ सय ३४ जना छन् । ६ सय ४६ जना सक्रिय संक्रमित हुन् । मन्त्रालयले काठमाडौंसहित ६ जिल्लालाई जोखिममा राखेको छ ।
उपत्यकामा दुई सातायता १ सय ३६ स्थानमा संक्रमित भेटिएका छन् । २४ स्थानमा संक्रमितको संख्या ५ वा ५ भन्दा बढी छ । साउन ९ देखि २१ सम्म काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा करिब ४ सय ८५ जना कोरोना संक्रमित देखिएका छन् । यसमा काठमाडौं महानगरमा मात्र करिब ६५ प्रतिशत अर्थात् ३ सय १५ जना संक्रमित भेटिएका छन् ।
सबैभन्दा बढी ७५ जना संक्रमित नेपाल प्रहरीको मुख्यालयमा भेटिएको छ । कालीमाटी, बागबजार र सामाखुसी क्षेत्रमा १०/१० जना संक्रमित पाइएको छ ।
घट्टेकुलोमा भेटिएका संक्रमित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक उच्च अधिकारीको परिवारका हुन्  ।
यी क्षेत्रका संक्रमितमध्ये अधिकांश लकडाउनपछि भारत र तराईबाट फर्केकाहरू रहेको ईडीसीडीले जनाएको छ । कालीमाटी, बागबजार र सामाखुसी उपत्यका बाहिरबाट आएका मानिसको बढी चहलपहल हुने स्थान हुन्  ।
अनामनगर, बल्खु, बालुवाखानी, बौद्ध, भंगाल, चाबहिल, दक्षिणढोका, इमाडोल, जोरपाटी, कलंकी, कीर्तिपुर, सोह्रखुट्टे क्षेत्रमा ३/३ जनामा संक्रमण देखिएको छ । बाफल, बसुन्धरा, भोटाहिटी, भोटेबहाल, च्यासल, क्षेत्रपाटी, दुवाकोट, धापासी, डल्लु, डिल्लीबजार, गोठाटार, गहनापोखरी, कपन, खुमलटार, कुलेश्वर, लगनखेल, महाबौद्ध, न्युरोड, नयाँबजार, पेप्सीकोला, रातोपुल, सुनाकोठी, ठैंबलगायत स्थानमा २/२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
काठमाडौं । मधुमेह आममानिसको ठूलो चिन्ताको रूपमा फैलिएको छ । यस रोगका कारण मानिसले आफूलाई मन परेको...
बाँके । कोहलपुरमा उपचारका क्रममा आज एक कोरोना सङ्क्रमितकोे निधन भएको छ । बर्दिया ठाकुरबाबा नगरपाल...
वीर अस्पतालमा शवबाट अंग निकालिएको हल्ला, के भन्छ अस्पताल ?
काठमाडौँ । वीर अस्पतालमा केही दिन अघि एक कोरोना संक्रमित मृतकको शवबाट अंग निकालिएको भन्ने विभिन्न...
कोरोना संक्रमणबाट युगाण्डामा एक नेपालीको मृत्यु
एजेन्सी । कोरोना संक्रमणबाट अफ्रिकी राष्ट्र युगाण्डामा एक नेपालीको मृत्यु भएको छ । विगत १४ वर्षदे...
थप ८,२३ कोरोना संक्रमित अस्पतालबाट डिस्चार्ज, निको हुनेको संख्या ४,८६१ पुग्यो
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभरबाट ८ सय २३ जना कोरोना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन् । स्...
घटेन काठमाडौं उपत्यकाभित्र संक्रमितको संख्या, उपत्यकामा १८०३७ पुग्यो संक्रमितको संख्या
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा ६४७ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । योसँगै उपत्यकाम...